minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny minisiteran’ny fahasalamana ary ireo mpiara-miombon’antoka hafa. Antony, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika, Rijasoa Josoa Andriamanana, dia iaraha-mahalala fa aretina mampitombo ny tahan’ny tsy fahatongavan’ny mpianatra mianatra ary mampisy fiantraikany ratsy amin’ny voka-panadinan’ireo mpianatra ka antony mila hamongorana azy. Efa paikadin’ity minisitera ity sy ny minisiteran’ny fahasalamana hatramin’izay ny fampiasana lay misy ody moka ary nahitana fahombiazana. Efa nahazo ny fiofanana tandrify mikasika izay ady amin’ny tazomoka izay ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisitera, raha ny fanazavana hatrany ka ny fampiharana sisa no tena imasoana. Faritra miisa 6 kosa no hanatontosana izay fizarana maharitra izay dia Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Sofia, Androy sy Atsimo atsinanana ary Atsimo andrefana.